Hurumende Inoti Inoda Kushanda neVanorapa neMishonga yeChivanhu Kurwisa Zvirwere zveGomara
Vamwe vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu vanoti vari kuona varwere vakawanda zvikuru vasiri kuenda kuzvipata apo vanenge vorwara nezvirwere zvegomarara.
Vanhu vazhinji munyika vari kubatwa nemagomarara epamuromo wepachibereko, pazamu nepasikarudzi yevarume.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano, vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nazvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rehutano, Dr Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunaana godobori vasati vauya kuzvipatara, nokudaro bazi rehutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Mukuru wesangano revanhu vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association Sekuru Friday Chisanyu, vanoti varume vakawanda vave kuuya kuzorapwa zvirwere zvegomarara izvo zviri kukonzerwa nekuputa fodya, kunwa zvinodhaka uye nekufema mweya usina kunaka apo pavanenge vachiita basa rechikorokoza.
Sekuru Chisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofa nenyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyazvi dzehutano.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Dr Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi rehutano munezvakanaka nokuti hazvigone kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Vaenderera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi asi vanoti rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezvehutano, VaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki uye vakatsinhira zvakataurwa naDr Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Gurukota rezvehutano Dr Obadiah Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu varikubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarrika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore.